စကားပြောဆိုမှုတိုင်းကို အနှောက်အယှက်ပေးသူနဲ့ ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ? - Lifestyle Myanmar
စကားပြောဆိုမှုတိုင်းကို အနှောက်အယှက်ပေးသူနဲ့ ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ?
ဒါက အလုပ်၊ အိမ်နှင့် ကျောင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်စကားပြောလို့ မပြီးသေးခင်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက် ကြားဖြတ်ပြောတာကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါက စိတ်တိုစရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။လူတိုင်းက ခဏတစ်ဖြုတ် ကြားဖြတ်နှောက်ယှက်ခြင်းတာမျိုးရှိနိုင်ပေမယ့် အမြဲတမ်းကြားဖြတ်ပြောတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရင် သင်ဘာလုပ်မလဲ?။ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို ကြားဖြတ်ဝင်ပြောတဲ့အခါ သူတို့ကို ကြင်နာစွာ ဆက်ဆံနိုင်ပေမယ့် ဆက်ဆံရေးက ခိုင်မြဲပါ့ဦးမလား?
“ဘာ့ကြောင့် လူတွေ ကြားဖြတ်ပြောဆိုကြတာလဲ”
စကားစမြည်ပြောနေစဉ်အတွင်းမှာ လူတွေ ဝင်နှောက်ယှက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။
၁။ သူတို့က စနစ်တကျ သွားနေကြတာကြောင့်ပါ
အချို့လူတွေက သူတို့ရဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထုတ်လွှင့်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့က သင့်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက် နားလည်လာတဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားလာကြပါတယ်။ သူတို့က သင့်ကို သူတို့ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ပြသဖို့ agree လုပ်ချင်ကြတာဖြစ်ပေမယ့် ဒါက ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ကြားဖြတ်နှောက်ယှက်မှု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ မယဉ်ကျေးမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ကင်းမဲ့ပုံရသော်လည်း တကယ်တော့ သူတို့ဟာ သင်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေကြတာပါ။
၂။ ကူညီဖို့ ကြားဖြတ်ကြတာပါ
အခြားလူတွေက သူတို့ကူညီချင်တာကြောင့် ကြားဖြတ်ပြောတတ်ကြပါတယ်။ စကားပြောနေစဉ်အတွင်းမှာ သူတို့က သင့်ရဲ့ ကွာဟချက်ကို ဖြည့်ပေးပြီး သူတို့ရဲ့ အတွေးတွေကို ကြားဖြတ်ပြောချင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေက ခေတ္တရပ်တန့်နေရတာမျိုးကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ တိတ်တိတ်နေရတာက သူတို့အတွက် အဆင်မပြေတာကြောင့် သူတို့ဟာ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ မှတ်ချက်တစ်ခုမျိုး ပေးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က မရိုမသေလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကို လျော့စေပေါ့စေဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။ ဒါက ကိုယ်ကျိုးကြည့်တယ်၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်လို့ ထင်ရသော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် အကူအညီပေးဖို့ သူတို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။
၃။ အလျင်လိုတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်
မကြာခဏ ဆိုသလို သူတို့က သင့်အား အရှိန်မြင့်လာစေဖို့ ကြိုးစားနေတာကြောင့် ကြားဖြတ်နှောက်ယှက်တာပါ။ သူတို့မှာ ကြားဖြတ်ဝင်ပြောချင်တဲ့ ဖိအားတွေ ခံစားနေရပြီး သင့်အတွေးတွေကို မြန်မြန်ပြီးစေချင်တာကြောင့် သူတို့ ဝင်ပြောရခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နားထောင်ခြင်းက သူတို့စိတ်ထဲမှာ အချိန်အများကြီးပေးရတယ်လို့ ထင်နေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက ပြောနေသူကို အရမ်းနာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလူတွေက သင့်အတွက် ဘယ်လောက်ရိုင်းစိုင်းပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်နေသလဲဆိုတာကို မသိကြပါဘူး။ သူတို့က အခြားသူတွေအပေါ် ပြုမှုတဲ့နည်းလမ်းကြောင့် သူတို့ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးက ပြန်မရတော့တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၄။ စိတ်ဆိုးနေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်
အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုမှာ စကားလုံးတစ်လုံးရဖို့ ခက်ခဲတဲ့အခါ စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူတို့ မကြားချင်တော့သလို ခံစားရတာကြောင့် စိတ်ပျက်စရာ ခံစားရတဲ့အခါ ကြားဖြတ်ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ပုံမှန်ပါပဲ။ သင်အရင်က လုပ်ခဲ့ဖူးပြီးတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အုပ်စုလိုက်ညှိနှိုင်းမှုမှာ ဒါကို ရိုင်းစိုင်းတယ်လို့ မှတ်ယူနိုင်ပေမယ့် ဆွေးနွေးမှုရဲ့ ပံ့ပိုးပေးသူက လူတိုင်းကို စကားပြောခွင့် မပေးတဲ့အတွက် အပြစ်တင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ facilitator ကောင်းတစ်ယောက်ဟာ လူတွေ အပယ်ခံရတယ်လို့ ခံစားရသော အခြေအနေများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ ဆွေးနွေးမှုမှာ ကြီးကြပ်ပြီး လူတိုင်းရဲ့ပါဝင်မှုကို အားပေးတယ်လို့ ခံစားရပေမယ့် လူတစ်ယောက်က စိတ်ဆိုးနေဆဲဆိုရင် ထိုသူအတွက် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဆွေးနွေးမှုခေါင်းစဉ်နဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါက အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးနဲ့ ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ် (သို့)အလုပ်ခွင်မှာ ဖိအားပေးသလိုခံစားရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို အမြဲတစေ ကြားဖြတ်နှောက်ယှက်တဲ့အခါ သင်ဘာလုပ်မလဲ?
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို အဆက်မပြတ် အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အခါ သင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်က ပြတ်သားပေမယ့် ကြင်နာပါ။ ဒေါသထွက်တာက လူတစ်ယောက်ကို ကြားဖြတ်နှောက်ယှက်ခြင်းကနေ ရပ်တန့်သွားစေမှာ မဟုတ်သလို သူနဲ့ သင့်ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို အကူအညီဖြစ်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၁။ ကြားဖြတ်တာကို လျစ်လျူရှုလိုက်ပါ
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အား တစ်ခါတစ်ရံ အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အခါ လျစ်လျူရှုလိုက်ပြီး ဆက်ပြောတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းက ကွဲပြားခြားနားစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ကြားဖြတ်ပြောတာမျိုး ။ သူတို့ကြားတဲ့အရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ကြားဖြတ်နှောက်ယှက်တိုင်းကို ဖြေရှင်းဖို့ မထိုက်တန်ပါဘူး။
၂။ communication စည်းမျဉ်းချမှတ်ပါ
သင်အစည်းအဝေးတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေရပါက conversation အစမှာ စည်းမျဉ်းတွေ သတ်မှတ်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။။ ပြောနေသူတစ်ယောက်ပြီးမှသာ အကြံဉာဏ်ဝင်ပေးဖို့၊ မေးခွန်းထမေးဖို့ သတ်မှတ်ပါ။ ခေါင်းဆောင်အချို့က ကြားဖြတ်အစပြုလာသူတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ အသံတိတ် လက်ဝှေ့ယမ်းပြတဲ့ အချက်ပြကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါက အစည်းအဝေးအလယ်မှာ သူတို့ကို အာရုံမစိုက်ဘဲ စကားပြောနေခြင်းကို ရပ်တန့်ဖို့ ကြားဖြတ်ပြောသူကို အသိပေးတာပါ။
၃။ မေးခွန်းတွေ မေးပါ
ပြောနေသူက ရပ်သွားပြီဆိုရင် မေးခွန်းတွေမေးပါ။ ဒါက ကြားဖြတ်ဝင်ပြောချင်သူအား ပြောလိုတဲ့အရာပြောခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သူတို့ဟာ ကောင်းတဲ့အတွေးတွေ၊ သောကတွေ ရှိပေမယ့် စောင့်ဆိုင်းဖို့ self-control မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မေးခွန်းမေးခြင်းက သူတို့ကို ထွက်ပေါက်တစ်ခု ပေးပါတယ်။ “ဒီတော့ ငါတို့မျှဝေခဲ့တဲ့ အရာနဲ့ပတ်သတ်လို့ မေးခွန်းတွေ၊ အတွေးတွေ ရှိပါသလား” ဆိုတာမျိုး ပြောပေးပါ။ ဒါက ကြားဖြတ်သူအားာ သူတို့ရဲ့အတွေးတွေကို မျှဝေခွင့်ပြုပါတယ်။
၄။ ကြားဖြတ်ပြောသူကို ရင်ဆိုင်တွေ့ပါ
တကယ်လို့ သင်ဟာ ကြားဖြတ်သူတစ်ယောက်ကို ရပ်တန်စေဖို့ မဟာဗျူဟာ အမျိုးမျိုး ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါက သူတို့ကို ဖြေရှင်းတာကအကောင်းဆုံး ပေါ်လစီ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင် (သို့) တစ်စုံတစ်ယောက် စကားပြောနေစဉ် ကြားဖြတ်သူက သူတို့ရဲ့အတွေးတွေကို ဖျက်ပစ်လိုက်ရင် ” ငါမင်းပြောတာကို ကြားချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ငါ့အတွေးတွေကို အရင်အဆုံးသတ်ခွင့်ပြုနိုင်မလား?”လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။